ဖေဖေတို့အတွက် ကလေးထိန်းဖို့ လမ်းညွှန်ချက်များ – Gentleman Magazine
ဖေဖေတို့အတွက် ကလေးထိန်းဖို့ လမ်းညွှန်ချက်များ
ကလေးထိန်းနည်းစာအုပ်တွေ မလိုပါဘူး။ တချို့ဟာတွေကတော့ လူတိုင်းသိပါတယ်။ သင့် ချစ်စရာ အတုံးအခဲလေး လက်ထဲရောက်လာတာနဲ့ မိဘစိတ်က နိုးထလာမှာပါ။ ဒါပေမယ့် စာအုပ်ထဲမှာတောင် မပါတဲ့ တချို့အရေးကြီးအချက်လေးတွေကို ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။
၉. အတွင်းခံ လဲတာ သင့်ကလေးရဲ့ အတွင်းခံကို တစောင်း လဲပေးပါ။ မဟုတ်ရင် သင့်တစ်ကိုယ်လုံး ပေကုန်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်ကောင်က ယောက်ျားလေးဖြစ်ရင်တော့ သူ့အင်္ဂါလေးကို ကာထားပါ။ မဟုတ်ရင် တစ်ခန်းလုံး သေးတွေ ပေကုန်ပါလိမ့်မယ်။
၈. အိမ်မှုကိစ္စ ကူလုပ်ခိုင်းပါ သင့်တော်တဲ့ အရွယ်ရောက်တာနဲ့ အိမ်မှုကိစ္စတွေ ကူခိုင်းပါ။ ကလေးတွေဟာ အရာရာကို သင်ကြားလိုပြီး သင်ထင်ထားတာထက် ပိုပြီး ကူလုပ်နိုင်ကြပါတယ်။ စစခြင်းမှာ ကလေးတွေနဲ့လုပ်တာဟာ သင့်ကို နှေးကွေးစေပေမယ့် နောက်ကျ အဆင်ပြေသွားမှာပါ။
၇. ကလေးအိပ်ချိန်ကို ဂရုစိုက်ပါ လူတွေက ကလေးကို အိပ်ပျော်အောင် ဘယ်လိုသိပ်ရမယ်၊ ကလေးတစ်ယောက်ဟာ တစ်ညကို ဘယ်နှနာရီအိပ်သင့်တယ် ဆိုတာ သင့်ကို အကြံပေးမှာပါ။ တကယ်တော့ အဲဒါဟာ ကလေးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတူကြပါဘူး။ သင့်ရဲ့ သိစိတ်ကို ယုံလိုက်ပါ။ တစ်ခါတစ်လေမှာ သင့်ကလေးကို သင်တို့ကုတင်ပေါ် ခေါ်သိပ်လိုက်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။
၆. သင့်ကလေးရဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေးကို ဂရုစိုက်ပါ သင့်ကလေးကို တခြားကလေးတွေနဲ့ တွေ့ပေးဖို့ ခဏခဏ လုပ်ပေးပါ။ သူ လေးဘက်သွားနိုင်တဲ့ အရွယ်ကတည်းက စလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ အဲဒါဟာ သူတို့ရဲ့ ဆက်ဆံရေးကို တိုးတက်စေပါတယ်။ သူတို့ဟာ တခြားသူတွေနဲ့ လိမ်လိမ်မာမာ ကစားဖို့ သင်ယူတတ်လာပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ ကျောင်းတက်ရမယ့်အချိန်အတွက် အဆင်သင့် ဖြစ်စေတာပေါ့။ သူတို့ဘာသာ တခြားကလေးတွေနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့အခါ သင့်အတွက်လဲ အနားယူဖို့ အချိန်ပိုရစေပါတယ်။
၅. စိတ်မဆိုးပါနဲ့ ကလေးတွေဟာ အကြောင်းမရှိပဲ ငိုတတ်ကြပါတယ်။ သင်တတ်နိုင်သမျှ လုပ်ပေးပြီးတာတောင် ဆက်ငိုနေတုန်းဆိုရင် စိတ်ညစ်သွားဖို့ တော်တော်များပါတယ်။ အသက်ဝဝ ရှုလိုက်ပြီး သင့်ဇနီးကို ထိန်းခိုင်းလိုက်ပါ။ နို့တိုက်လိုက်တာက အချိန်တော်တော်များများမှာ အဆင်ပြေသွားတတ်ပါတယ်။
၄. IPad တွေက ကလေးထိန်းပစ္စည်း မဟုတ်ပါဘူး သင် အလုပ်လုပ်နေချိန်မှာ ကလေးကို အာရုံလွှဲထားနိုင်ဖို့ TV နဲ့ Tablet တွေကို မသုံးပါနဲ့။ အသက် နည်းနည်းကြီးလာမှ TV ကြည့်ခွင့်ပေးသင့်ပါတယ်။ ကာတွန်းတွေအစား ရောင်စုံခဲတံတွေ၊ ပဟေဋ္ဌိဆက်နည်းတွေကို ပေးထားတာက သူတို့အတွက် ပိုကောင်းပါတယ်။
၃. ၁၀ – ၁၅ ရာနှုန်းသော ကလေးတွေဟာ NCU ထဲမှာ နေခဲ့ရပါတယ် ကျွန်တော့်သားဟာဆို ကျွန်တော့်မိန်းမက ခြောက်ပါတ်တောင် အရေးပေါ်စောမွေးခဲ့လို့ NCU ထဲမှာ ၁၂ ရက် နေခဲ့ရပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကလေး နီတာရဲလေးကို မှန်ပေါင်းချောင်အောက်မှာ ဝိုင်ယာကြိုးတွေနဲ့ မြင်ရတာ လန့်စရာပါ။ ဒါပေမယ့် စိတ် မပူပါနဲ့။ အခုခေတ်ဆေးပညာက အံ့ဩဖို့ ကောင်းလွန်းပါတယ်။
၂. ကလေးရှေ့မှာ ဘယ်တော့မှ စကားမများပါနဲ့ သင်နဲ့ သင့်ဇနီး စကားများနေတာ ကလေးမြင်သွားရင် အဲဒါဟာ သူတို့ကို စကားများဖို့ သင်ကြားပေးလိုက်သလိုပါပဲ။ သင့်ကလေးက သင့်ကိုပြန်ပြီး စကားများပြလာရင် သင် အခက်တွေ့ပါပြီ။ ကလေးအိပ်ပျော်မှ သင်တို့ ပြောစရာရှိတာ ပြောကြပါ။
၁. ကလေးကို သင့်ကားပေါ်ကို ခေါ်သွားပါ ကလေးထိန်းနည်းစာအုပ်တွေအရ တကယ်လို့ သင့်ကလေးက အရမ်းငိုနေတယ်ဆို သင့်မှာ ကြိုးစားကြည့်စရာ ၄ ခု ရှိပါတယ်။ အတွင်းခံကို စစ်၊ ဗိုက်ဆာနေလား စစ်၊ ကျောကုန်းလေးကို ပုတ်ပေးရမလား စစ်၊ ဖက်ထားရင် အငိုတိတ်မလား စမ်းကြည့် တို့ပါပဲ။ အဲဒါတွေမှ မတိတ်သေးရင် ၁ က ပြန်စပါ။ အဲဒါက ကလေးထိန်းနည်း စာအုပ်တွေက ပြောတာပါ။ ကျွန်တော့်မှာ ကိုယ်တွေ့တစ်ခု ရှိပါသေးတယ်။ တကယ်လို့ ကလေးက ဘယ်လိုမှ အငိုမတိတ်ဖူးဆိုရင် သင့်ကားဆီကိုသွား၊ အနီးဆုံး ကားမပိတ်တဲ့ အဝေးပြေးလမ်းပေါ်တက်ပြီးလျှောက် မောင်းပါတော့။
ဖဖေတေို့အတှကျ ကလေးထိနျးဖို့ လမျးညှနျခကျြမြား
ကလေးထိနျးနညျးစာအုပျတှေ မလိုပါဘူး။ တခြို့ဟာတှကေတော့ လူတိုငျးသိပါတယျ။ သငျ့ ခဈြစရာ အတုံးအခဲလေး လကျထဲရောကျလာတာနဲ့ မိဘစိတျက နိုးထလာမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ စာအုပျထဲမှာတောငျ မပါတဲ့ တခြို့အရေးကွီးအခကျြလေးတှကေို ကြှနျတျောပွောပွပါမယျ။
၉. အတှငျးခံ လဲတာ သငျ့ကလေးရဲ့ အတှငျးခံကို တစောငျး လဲပေးပါ။ မဟုတျရငျ သငျ့တဈကိုယျလုံး ပကေုနျပါလိမျ့မယျ။ သငျ့ကောငျက ယောကျြားလေးဖွဈရငျတော့ သူ့အင်ျဂါလေးကို ကာထားပါ။ မဟုတျရငျ တဈခနျးလုံး သေးတှေ ပကေုနျပါလိမျ့မယျ။
၈. အိမျမှုကိစ်စ ကူလုပျခိုငျးပါ သငျ့တျောတဲ့ အရှယျရောကျတာနဲ့ အိမျမှုကိစ်စတှေ ကူခိုငျးပါ။ ကလေးတှဟော အရာရာကို သငျကွားလိုပွီး သငျထငျထားတာထကျ ပိုပွီး ကူလုပျနိုငျကွပါတယျ။ စစခွငျးမှာ ကလေးတှနေဲ့လုပျတာဟာ သငျ့ကို နှေးကှေးစပေမေယျ့ နောကျကြ အဆငျပွသှေားမှာပါ။
၇. ကလေးအိပျခြိနျကို ဂရုစိုကျပါ လူတှကေ ကလေးကို အိပျပြျောအောငျ ဘယျလိုသိပျရမယျ၊ ကလေးတဈယောကျဟာ တဈညကို ဘယျနှနာရီအိပျသငျ့တယျ ဆိုတာ သငျ့ကို အကွံပေးမှာပါ။ တကယျတော့ အဲဒါဟာ ကလေးတဈယောကျနဲ့တဈယောကျ မတူကွပါဘူး။ သငျ့ရဲ့ သိစိတျကို ယုံလိုကျပါ။ တဈခါတဈလမှော သငျ့ကလေးကို သငျတို့ကုတငျပျေါ ချေါသိပျလိုကျတာ ပိုကောငျးပါတယျ။
၆. သငျ့ကလေးရဲ့ လူမှုဆကျဆံရေးကို ဂရုစိုကျပါ သငျ့ကလေးကို တခွားကလေးတှနေဲ့ တှပေ့ေးဖို့ ခဏခဏ လုပျပေးပါ။ သူ လေးဘကျသှားနိုငျတဲ့ အရှယျကတညျးက စလုပျပေးသငျ့ပါတယျ။ အဲဒါဟာ သူတို့ရဲ့ ဆကျဆံရေးကို တိုးတကျစပေါတယျ။ သူတို့ဟာ တခွားသူတှနေဲ့ လိမျလိမျမာမာ ကစားဖို့ သငျယူတတျလာပါလိမျ့မယျ။ သူတို့ ကြောငျးတကျရမယျ့အခြိနျအတှကျ အဆငျသငျ့ ဖွဈစတောပေါ့။ သူတို့ဘာသာ တခွားကလေးတှနေဲ့ အလုပျရှုပျနတေဲ့အခါ သငျ့အတှကျလဲ အနားယူဖို့ အခြိနျပိုရစပေါတယျ။
၅. စိတျမဆိုးပါနဲ့ ကလေးတှဟော အကွောငျးမရှိပဲ ငိုတတျကွပါတယျ။ သငျတတျနိုငျသမြှ လုပျပေးပွီးတာတောငျ ဆကျငိုနတေုနျးဆိုရငျ စိတျညဈသှားဖို့ တျောတျောမြားပါတယျ။ အသကျဝဝ ရှုလိုကျပွီး သငျ့ဇနီးကို ထိနျးခိုငျးလိုကျပါ။ နို့တိုကျလိုကျတာက အခြိနျတျောတျောမြားမြားမှာ အဆငျပွသှေားတတျပါတယျ။
၄. IPad တှကေ ကလေးထိနျးပစ်စညျး မဟုတျပါဘူး သငျ အလုပျလုပျနခြေိနျမှာ ကလေးကို အာရုံလှဲထားနိုငျဖို့ TV နဲ့ Tablet တှကေို မသုံးပါနဲ့။ အသကျ နညျးနညျးကွီးလာမှ TV ကွညျ့ခှငျ့ပေးသငျ့ပါတယျ။ ကာတှနျးတှအေစား ရောငျစုံခဲတံတှေ၊ ပဟဋ်ေဌိဆကျနညျးတှကေို ပေးထားတာက သူတို့အတှကျ ပိုကောငျးပါတယျ။
၃. ၁၀ – ၁၅ ရာနှုနျးသော ကလေးတှဟော NCU ထဲမှာ နခေဲ့ရပါတယျ ကြှနျတေျာ့သားဟာဆို ကြှနျတေျာ့မိနျးမက ခွောကျပါတျတောငျ အရေးပျေါစောမှေးခဲ့လို့ NCU ထဲမှာ ၁၂ ရကျ နခေဲ့ရပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ ကလေး နီတာရဲလေးကို မှနျပေါငျးခြောငျအောကျမှာ ဝိုငျယာကွိုးတှနေဲ့ မွငျရတာ လနျ့စရာပါ။ ဒါပမေယျ့ စိတျ မပူပါနဲ့။ အခုခတျေဆေးပညာက အံ့ဩဖို့ ကောငျးလှနျးပါတယျ။
၂. ကလေးရှမှေ့ာ ဘယျတော့မှ စကားမမြားပါနဲ့ သငျနဲ့ သငျ့ဇနီး စကားမြားနတော ကလေးမွငျသှားရငျ အဲဒါဟာ သူတို့ကို စကားမြားဖို့ သငျကွားပေးလိုကျသလိုပါပဲ။ သငျ့ကလေးက သငျ့ကိုပွနျပွီး စကားမြားပွလာရငျ သငျ အခကျတှပေ့ါပွီ။ ကလေးအိပျပြျောမှ သငျတို့ ပွောစရာရှိတာ ပွောကွပါ။
၁. ကလေးကို သငျ့ကားပျေါကို ချေါသှားပါ ကလေးထိနျးနညျးစာအုပျတှအေရ တကယျလို့ သငျ့ကလေးက အရမျးငိုနတေယျဆို သငျ့မှာ ကွိုးစားကွညျ့စရာ ၄ ခု ရှိပါတယျ။ အတှငျးခံကို စဈ၊ ဗိုကျဆာနလေား စဈ၊ ကြောကုနျးလေးကို ပုတျပေးရမလား စဈ၊ ဖကျထားရငျ အငိုတိတျမလား စမျးကွညျ့ တို့ပါပဲ။ အဲဒါတှမှေ မတိတျသေးရငျ ၁ က ပွနျစပါ။ အဲဒါက ကလေးထိနျးနညျး စာအုပျတှကေ ပွောတာပါ။ ကြှနျတေျာ့မှာ ကိုယျတှတေ့ဈခု ရှိပါသေးတယျ။ တကယျလို့ ကလေးက ဘယျလိုမှ အငိုမတိတျဖူးဆိုရငျ သငျ့ကားဆီကိုသှား၊ အနီးဆုံး ကားမပိတျတဲ့ အဝေးပွေးလမျးပျေါတကျပွီးလြှောကျ မောငျးပါတော့။
Previous: ယောက်ျားတိုင်း သူတို့ အင်္ဂါနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး ပြောတတ်ကြတဲ့ အလိမ်အညာ ၁၀ မျိုး
Next: မှတ်ဉာဏ်ကောင်းဖို့ နည်းလမ်း (၆)ခု